China Abenzi betanki leoyile kunye nabathengisi | UVishi
Isilinda esincinci ye-hydraulic
Isilinda yentonga ngokubanzi
Isilinda seoyile yokunyusa irhasi
Isilinda esinyusa irhasi
Isilinda esisebenza ngesanti kubunzulu baphantsi
Umbhobho wePu U
Emva kwe-DHC epholileyo
Isilinda esincinci esincinci seYCRJ
I-YMU yesilinda esemgangathweni ophakathi
Isilinda ejikelezayo esixineneyo YMKAWC
Isilinda esikhuthazayo YNB (P) H
Kukho iintlobo ngeentlobo ekubunjweni kwesilinda se-hydraulic, kwaye kukwakho neendlela ezahlukeneyo zokwahlula-hlula: Ngokoluhlobo lwe-zhi esecaleni, inokwahlulahlulwa ibe luhlobo lwentshukumo yokubuyisela umva kunye nohlobo lokujikeleza olujikelezayo; Ngokwempembelelo yoxinzelelo ulwelo lwe-DAO, lungohlulwa lube luhlobo lwentshukumo enye kunye nohlobo lwentshukumo ephindwe kabini.Ngokwesakhiwo sinokuhlulwa sibe luhlobo lwepiston, uhlobo lweplunger, uhlobo olunemikhono emininzi ye-telescopic sleeve, i-rack kunye nohlobo lwe-pinion; Ngokwifom yokufaka inokwahlulwa ku intonga, namajikazi, unyawo, shaft kwakuxhomekeke, njl Ngokutsho grade uxinzelelo zingahlulwa 16Mpa, 25Mpa, 31.5mpa njalo njalo.
1. Uhlobo lwePiston
I-piston eyodwa ye-hydraulic cylinder ine-piston rod ekuphela kwesinye isiphelo.I-piston enye ye-hydraulic cylinder. I-inlet kunye ne-A kunye ne-B ephuma kuzo zombini iziphelo zingadlulisa uxinzelelo lweoli okanye ukubuyisela ioli ukuqonda ukuhamba kweendlela ezimbini, kunjalo ebizwa ngokuba yi-silinda esebenza kabini.
I-piston inokuhamba kuphela kwicala elinye, kwaye icala elichaseneyo kufuneka ligcwaliswe ngamandla angaphandle, kodwa ukubetha kwayo kukhulu kakhulu kunesilinda se-piston hydraulic.
Uhlobo lwe-Piston isilinda esine-hydraulic singahlulwa-hlulwa sibe luhlobo olunye lwe-bar kunye nohlobo lwe-bar ezimbini zezakhiwo ezibini, indlela emiselweyo yibloko yesilinda esisigxina kunye nepiston yentonga elungelelanisiweyo iintlobo ezimbini, ngokwentsebenzo yoxinzelelo lolwelo inohlobo lwesenzo esinye kunye nohlobo lwesenzo esiphindwe kabini. Kwisilinda esisebenza ngesanti kubunzulu baphantsi esinye, ioyile yoxinzelelo inikezelwa kuphela kwisisu sesanti, kwaye isilinda siyayiqonda intshukumo-yentshukumo yoxinzelelo lwelwelo, ngelixa intshukumo yokujonga ulwalathiso ifezekiswa yimikhosi yangaphandle (enje Amandla entwasahlobo, ubunzima obufileyo okanye umthwalo wangaphandle, njl.) Ukuhamba kwepiston kumacala amabini e-hydraulic silinda egqityiweyo kugqitywa ngokunyanzelwa koxinzelelo lolwelo ngokungena kwenye ioyile yamaGumbi amabini.
2. Uhlobo lwePlunger
(1) Uhlobo lwe-hydraulic cylinder cylinder luyinto enye ye-hydraulic cylinder, uxinzelelo lwe-hydraulic lunokufezekisa kuphela indlela yokuhamba, ukubuya kwe-plunger kuxhomekeke kwamanye amandla angaphandle okanye ubunzima be-plunger;
(2) I-plunger ixhaswa kuphela yi-cylinder liner kwaye ayiqhagamshelani ne-cylinder liner, ngoko ke i-cylinder liner kulula ukuyenza, ngoko kufanelekile ukwenza i-stroke ende ye-hydraulic cylinder;
(3) I-plunger ihlala iphantsi koxinzelelo xa isebenza, ke kufuneka ibe nokuqina okwaneleyo;
(4) Ubunzima beplunger buhlala bukhulu, xa bubekwe ngokuthe tye, kulula ukuba buguqulwe ngenxa yokuzithengela, okukhokelela kunxibo lwamacala amabini kunye nesikhokelo, ke ukusetyenziswa kwaso ngokuthe nkqo kulunge ngakumbi.
3. Uhlobo lweTeleskopu
Isilinda ye-hydraulic ebuyisekayo inamanqanaba amabini okanye nangaphezulu episton, ipiston kwisilinda samanzi esirhoxiswayo ukusuka kwesikhulu ukuya kwesincinci, kwaye akukho mthwalo uhlehliswayo umthwalo ngokubanzi ukusuka kwincinci ukuya kwelikhulu. Olu hlobo lwesilinda esihamba ngesanti kubunzulu baphantsi luhlala lusetyenziswa koomatshini bokwakha kunye noomatshini bezolimo.Kukho iipiston ezininzi kwisindululo esinye, intshukumo nganye yokulandelelana kwepiston, isantya sayo sokukhupha kunye namandla okuphuma ziyatshintshwa.
Egqithileyo Isilinda esincinci ye-hydraulic
Okulandelayo: Ngokucofa ipleyiti
Isilinda Esincinci Sentonga
Isilinda esiyiCompact YAQ2
Isilayidi esityibilikayo sohlobo 4 uzipho womoya ngomnwe YMHS4
I-cylinder encinci ye-Twil rod YCXSJ